अमेरिकाबासी नेपालीले विश्व शान्ति र ऐक्यबद्धताको निम्ति द्वीप प्रज्जवलन : - Namasteholland, News, Information and Technology
२९ बैशाख २०७७, सोमबार २१:३२0151
कोरोनाको संक्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त छ अहिले । यसबेला सारा मानिसमा तनाव छ, आफन्त गुमाएको पिडा छ, अब के होला भन्ने त्रासैत्रासमा बाँच्नुपरेको अवस्था छ मानिसका लागि । यस्तो परिस्थितिमा मनलाई कसरि सम्हाल्ने, शान्ति कसरि जागृत गर्ने ?
यो अहम प्रश्नप्रति मध्यनजर गर्दै मनमा शान्ति जगाउँ भन्ने भावनाका साथ “शान्तिको कामना” बोलको छोटो सांगीतिक कोशेली लिएर हामी जनमानसमा आएका छौं । बुद्ध जयन्तीको पावन अवसर पनि हो, यसै समयलाई सदुपयोग गर्दै हामीले यो गीत प्रकाशित गरेका हौँ । बाँच्नका लागि शान्ति, एकता र शाहस मुख्य आधार मानिन्छन, यीनैको प्राप्तिका लागि आ-आफ्नो मनलाई दह्रो पारौं, निराश नबनौं, यो संकटबाट पार पाउन एकताबद्ध भै जुटौं भन्ने भावनालाई संसारभर फैलाउन सहयोगी बनोस भन्ने अभिप्रायका साथ यो सांगीतिक कोशेली पेश गरिएको छ ।
राज सागर र अन्जु श्रेष्ठको स्वरमा प्रस्तुत यो गीतको रचना राजा घले र शव्द ज्ञानेन्द्र गदालले गर्नुभएको छ भने यसमा राज सागरले संगीत भर्नुभएको छ । अमेरिकामा रहनुहुने आ-आफ्नो क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त केहि व्यक्तित्वहरुको यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ ।
आऊँ हामी सबै मिली, शान्तिको दियो जलाउँ
मृत्युलाई हामी जित्नेछौं, मनको डर भगाऊँ ।
एकता हाम्रो शक्ति हो, संकटलाई पर फाल्नुछ
शान्तिको शास फेर्नलाई, साहसी कदम चाल्नुछ ।
” दिवंगतहरुको आत्मा शान्ति होस्, र जीवितहरुको मन शान्ति होस्, यो शान्तिदिपको उज्यालो सबैमा पुगोस्” ।
ज्ञानेन्द्र गदाल https://www.youtube.com/watch?v=UsiTSZ2OGZc
गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेन द्वरा राहत वितरणमा NRNA, Madrid को सकृयता।
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार २२:२९0917
भयावह बन्दै नसर्ने रोग : मधुमेह, ब्लडप्रेसर र क्यान्सरबाट हुन्छ ६६ प्रतिशतको निधन !
१९ चैत्र २०७५, मंगलवार ११:५०0936
सरकारको एक वर्ष : यस्ता छन् अर्थतन्त्रका सात सूचक, कहाँ चुके अर्थमन्त्री ?
२८ माघ २०७५, सोमबार ११:४०0417
Hey Buddy!, I found this information for you: "अमेरिकाबासी नेपालीले विश्व शान्ति र ऐक्यबद्धताको निम्ति द्वीप प्रज्जवलन :". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6/. Thank you.